ကလေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လိင်စော်ကားမှုတွေကိုင်တွယ်ဖို့ ဥပဒေသစ်ပြဌာန်းမည်
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေအပြင် မသန်စွမ်းနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲ သုံးစားမှုတွေ ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ဖို့ ဥပဒေတွေ အသစ်တွေရေးဆွဲနေသလို အရေးယူမှုပိုင်းမှာလည်း ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်မျှတမှု မရှိတာ တွေ့ရရင် ပြန်လည်အရေးယူ နိုင်ဖို့လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ ပြည်တဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေဘ၀ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် လည်း လုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်းစီစဉ်နေပြီး ထိရောက်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်မယ်လို့ ဂတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကမေခကပေးပို့ထားပါတယ်။
ကလေးသူငယ်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေကို အကြမ်းဖက်တာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုတွေ တိုးပွားလာတာမှာ ထိရောက် တဲ့အရေးယူမှုမရှိတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေချိန်မှာဘဲ အစိုးရဘက်က လွှတ်တော်မှာ ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်သွားမယ်လို့ ဒီကနေ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။
“တရားရုံးကနေ ချမှတ်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ဆက်လျင်းပြီး ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် မျှတမှုမရှိတဲ့အမှုတွေကို စီစစ်ပြီး၊ အယူခံမှု စီစဉ်မှုများ တက်ရောက်ခြင်းတွေကိုလည်း အလေးထားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ သက်ငယ်မုဒိမ်းဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုအပိုင်းမှာ အားနည်းချက်ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပေါ် တည်ဆဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ထိေ၇ာက်သောပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်ေ၇းအတွက်ကို လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှာ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ Convention ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အကြံပြုချက်များနဲ့ အညီ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေအဖြစ် ပြန်လည်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် အမျိုးသမီးများ အပေါ်အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေကိုလည်း အသင့်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းများမှ ကလေးနဲ့ အမျိုးသမီးများ ၊ မသန်စွမ်းသူအမျိုးသမီးများအပေါ်မှာ ကျူးလွန် တဲ့ မုဒိမ်းမှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိေ၇ာက်ဟန့်တားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်ေ၇းကိုလည်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲလျက်ရှိကြောင်း တင်ပြပါတယ်။”
ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးက ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
လက်ရှိ ပြည်တဲရေးဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေအရ ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိက ကလေးငယ်တွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်စော် ကားမှုဟာ မုဒိန်းမှုတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂ဆနီးပါးတိုးလာပါတယ်။ အသက်အပိုင်းအခြားအရဆိုရင်လဲ ၂နှစ်အရွယ်က စပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခံရတာ မျိုးရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုတွေတိုးတက်လာတဲ့နှုန်းထားတွေနဲ့ ဘယ်လိုလူတွေက ပိုပြီးကျူးလွန်သလဲဆိုတာကို ခုလို လွှတ်တော်မှာ ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းကနေ ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို စိစစ်တဲ့အခါမှာ ၁၆ နှစ်အောက် လူငယ် ၅. ၀၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၁၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိ လူငယ် ၈.၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ၁၈ နှစ်မှ ၅၀ နှစ်အထိက ၈၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၅၀ နဲ့ အထက်က ၆. ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အသက် ၁၆ နှစ်အောက် လူငယ်များပင်လျှင် အဓမ္မကျူးလွန်မှုတွေကို ပြုလုပ်လာကြောင်းလည်း ကျနော်တို့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ အသက် ၅၀ ကြား အရွယ်တွေဟာ ကလေးသူငယ် အဓမ္မပြုကျင့်မှုကို အများဆုံးကျူးလွန်ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ နှစ်အလိုက် မုဒိမ်းဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက်တွေများလာသလိုပဲ သက်ငယ်မုဒိမ်းဖြစ်ပွားမှု ရာခိုင်နှုန်းတွေကလည်း မြင့်မားလာတာကိုလည်း စိုးရိမ်ဖွယ် တွေ့ရှိရပါတယ်။”
အဓမ္မပြုကျင့်မှုခံရသူ ကလေးငယ်တွေရဲ့ မိသားစုတွေဟာလည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကြီးပြင်းကြရသူတွေ အများစုဖြစ်တာကြောင့် မိဘတွေက သားသမီးကို စောင့်ရှောက်မှု မပေးနိုင်တာ၊ ကျုးလွန်မှုတွေဖြစ်အောင် အားပေးရာရောက်စေတဲ့ ညစ်ညမ်းစာပေ၊ ဗွီဒီယိုတွေ နှိမ်နင်းဖို့လိုနေတာ တွေကြောင့်လို့ ထောက်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်စော် ကားခံရသူတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ၀ိုင်းပယ်မှုနဲ့ မိသားစု အနေနဲ့ ဆက်လက် ရပ်တည်ရေး အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရမှု စတာတွေနဲ့ ကြုံနေတာတွေရှိတာကြောင့် အစိုးရက ထိရောက်စွာ ကူညီ ကယ်ဆယ်ပေးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ခုလို အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ကျူးလွန်ခံရတဲ့ ကလေးများအား အပြစ်တင်ခြင်း လူအသိုင်းအ၀ိုင်များမှ ပစ်ပယ်ထားခြင်းများ မပြုကြပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ကုစားရန်လိုအပ် သကဲ့သို့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုလည်း ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံးဥပဒေအရ မဟုတ်ပဲ ကလေးသူငယ်များအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေအပေါ် အထူးဥပဒေတွေပြဌာန်းပြီးတော့ ထိရောက်တဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေသတ်မှတ်ပြီး အပြစ်ပေးအရေးယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေ အနိုင်ကျင့် စော်ကားခံရမှုတွေမှာ ကျုးလွန်သူတွေဟာ သူစိမ်းတွေတင်မဟုတ်ဘဲ၊ သွေးသားတော်စပ်သူတွေပါ ပါဝင်နေတဲ့ အတွက်လည်း ကလေးငယ်တွေဘ၀ လုံခြုံရေးအတွက် ပိုပြီးစိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာနေရဆဲပါ။
ဥပဒေအသစ်တွေရေးဆွဲနေပြဌာန်းနေပြီလို့ အစိုးရဘက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ဒီဥပဒေကို ဘယ်ချိန်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြမလဲဆိုတာကတော့ ဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပါဘူး။
၀န်ကြီးကတော့ ကလေးသူငယ်တွေအပြင် မသန်စွမ်းနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲ သုံးစားမှုတွေ ကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ဖို့ ဥပဒေ တွေပြဌာန်းပြီးထိရောက်စွာ အရေးယူဖို့လဲ လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ဂတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။